मनोरन्जन | BARDIYA ONLINE |
वि.सं. बुधबार, फाल्गुन ८, २०७५ तदनुसार 20 February 2019
गायक ऋषी खड्काले साहुकि बेटि चाहियो भने पछि भयो यस्तो (भिडियो सहित)
बर्दिया । पछिल्लो समय एक पछि अर्को हिट गीतहरु निकाल्दै आई रहेको गाएक ऋषी खड्काको र्यापमा अर्को गीत बजारमा आएको छ । गायक लक्ष्मण राजख्वानको स्वर रहेको गीतमा ऋषी खड्काको र्याप सुन्न सकिन्छ । चक्र बम युट्युब च्यानलबाट बजारमा आएको गीतले सावैजनिक भएको छोटो समयमा नै २ लाख बढी दर्शकको मायाँ पाई सकेको छ [पूरा पढ्नुहोस्]
चर्चित गायक माल्दाई एपिक नेपाल म्युजिक अवार्डमा उत्कृष्ठ पाँचमा
भुरिगाउँ,बर्दिया। “गर्लफ्रेन्ड छैन” गितबाट गायक कमल बिसी माल्दाई एपिक नेपाल म्युजिक अवार्डमा उत्कृष्ठ पाँच (Top 5) मनोनयनमा परेका छ्न । लोकपप नवगायक बिधा बाट उनी मनोनयनमा परेका हुन । युवामाझ लोकप्रिय बनेको गर्लफ्रेन्ड छैन गितमा गायक बिसीले शब्द, संगीत, स्वर र अभिनय समेत गरेका छन । धेरै कलाकारलाई पछि पार्दै गायक बिसी उत्कृष्ठ पाँचमा पर्न सफल भएका हुन । “कला र गलाको संरक्षण [पूरा पढ्नुहोस्]
बर्दियाका युवा केशव चालिसेको अभिनय रहेको सालैजो सार्वजनिक
ठाकुरबाबा, बर्दिया। मेरो लागि जोवन सालैजो गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । बर्दियाका युवा केशव चालिसेको अभिनय रहेको यस गीतमा करीश्मा शाही ठकुरीले उनलाई साथ दिएकी छिन। त्यस्तै भिडियोमा प्रकाश भट्ट र निशा शाही लगायतको अभिनय रहेको छ । चर्चित गायिका शर्मिला गुरुङ र सञ्जय घलेको स्वर रहेको ‘मेरो लागि जोवन।।।(सालैजो)’ गीतमा विवश दर्लामीको शब्द र लय छ । घनश्याम चौधरीले [पूरा पढ्नुहोस्]
‘नेपालको स्वार्थबाहेक…’ राष्ट्र भावको गजल सार्वजनिक
भुरिगाउं,बर्दिया। गायक, रचनाकार तथा संगितकार प्रभात सुबेदीको नयाँ स्वदेशगान सार्वजनिक भएको छ । “नेपालको स्वार्थ बाहेक” बोलको स्वदेश गान भर्खरै युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको हो । रिचा लुइटेल र प्रभात सुबेदीको शब्द रचनामा ‘नेपालको स्वार्थ बाहेक…’ स्वदेशगानमा प्रभात सुबेदी, रकेश ओली,मुना ओली, राधा खड्काको संयुक्त स्वर रहेको छ । प्रभात सुबेदी स्वंमको संगित रहेको यो [पूरा पढ्नुहोस्]
ठाकुरबाबा,बर्दिया। स्टेज तताउन माहिर बर्दियाका प्रतिभाशाली गायक गेम राज गिरी फेरी एक पटक साँगितिक माहोल तताउन आएका छन । “केरा लैजाउँ पावर, एकैनाशे गैजाउँ लाहोर…” बोलमा रहेको पश्चिमको निकै लोकप्रिय भाका टप्पा गीत लिएर बजार तताउन आईपुगेका हुन । नाचुँनाचुँ लाग्ने यो टप्पा गीतले यो वर्षको चिसो भगाउने निश्चित जस्तै छ । डान्सिङ मूडमै रहेको गेमराजको अघिल्लो साँगितिक भेट [पूरा पढ्नुहोस्]
बर्दियाका सफल ब्यवसायीहरुले कलाकारलाई गरे भब्य स्वागत तथा सम्मान
काठमाडौं। बर्दियाका सफल ब्यवसायीहरुले कलाकारहरु लाई भब्य स्वागत तथा सम्मान गरेका छन । युवा गायक कमल बिसी माल्दाईको झ्याउरे गितको सुटिङका क्रममा उनिहरुले उक्त गितमा अभिनय गर्ने ५ जना कलाकार लाई सम्मान गरेका हुन । बर्दिया बाँसगढीका सफल ब्यवसायी तथा बुद्धिजीवी शंकर शर्मा, राजु सुबेदी र ईन्द्रजित बुढाक्षेत्रीले सुटिङमै कलाकार लाइ दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए। सम्मानित [पूरा पढ्नुहोस्]
मेरो माया कता छ कुन्नी…? माल्दाईको नाचुँनाचुँ लाग्ने झ्याउरे गीत भिडियो सहित
बर्दिया। बर्दियाली चर्चित लोक दोहोरी गायक कमल बिसी माल्दाई आफ्नी माया खोज्दै सांगितिक बजारमा नाचुँनाचुँ लाग्ने गीत लिएर आएका छन । “मेरो माया कता छ कुन्नी…” बोलको झ्याउरे गीत माल्दाईले शनिवार आफ्नै युट्युबबाट सार्वजनिक गरेका हुन । झ्याउरे गीतमा कमल बि.सी. माल्दाई र तुलसी घर्ती मगरको स्वर रहेको छ भने गीतको शब्द रचना र संगीत तपि कुमार सिंह ठकुरीले गरेका हुन्। मौलिक [पूरा पढ्नुहोस्]
सिर्जना कार्कीको स्वरमा ‘धेरै-धेरै’ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
बर्दिया। सिर्जना कार्कीको स्वरमा रहेको ‘धेरै-धेरै’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो युटुबमार्फत सार्वजनिक भएको छ। यस अघी ‘मनको राजा’ ‘माया’ लगायत सुमधुर गीतबाट श्रोताको अत्याधिक माया पाएकी गायिका कार्कीले यो म्यूजिक भिडियो आफ्नै युटुब सिर्जना कार्की मार्फत सार्वजनिक गरेकी हुन । प्रायः सबै गीतमा कर्णप्रिय सुनिने गायिका कार्की यो रोमान्टिक गीतमार्फत दर्शक तथा स्रोताको [पूरा पढ्नुहोस्]
बर्दियामा कलाकार तथा सर्जक मञ्च गठन
गुलरिया, बर्दिया। बर्दियामा साधनारत कलाकारहरु एकजुट भएका छन । बर्दियाका दुई दर्जन बढी स्रष्टाहरुको उपस्थितिमा भएको भेलाले बर्दियाका सबै स्रष्टाहरुलाई समेट्ने उद्देश्यले संस्कृतिकर्मी तथा कलाकार प्रभात सुवेदीको अध्यक्षतामा कलाकार तथा सर्जक मञ्च (कसम) बर्दियाको तदर्थ समिति गठन गरिएको छ । कसमको नवगठित समितिको उपाध्यक्षमा खगेन्द्र नेपाल, सचिव विष्णु थापा ‘सरगम’, [पूरा पढ्नुहोस्]
मौलीक तिजगीत पुर्वै जाने छुकछुके रेल… (भिडियो सहित)
बर्दिया । मौलीक तिजगीत ‘पुर्वै जाने छुकछुके रेल…’ सार्वजनिक भएको छ । गीतमा ऋषी खड्का र नितु राजख्वानको आवाज छ । ऋषी खड्काको लय तथा शब्द सृजना रहेको गितको निर्देशन लक्ष्मण राजख्वानले गरेका छन् । बिहारी दहितले छायाँकन गरेको गीतको भिडियोलाई चेतन सागरले सम्पादन गरेका छन् । बर्दियाको धार्मिक तथा पर्यटकिय क्षेत्र ठाकुरबाबा मन्दिर परिसरमा छायाँकन गरिएको गीतको भिडियोमा [पूरा पढ्नुहोस्]
ठाकुरबाबा नगरपालिकामा मोतीबिन्दुको अपरेसन शिविर हुँदै
कर्णाली तथा गेरुवा नदिको तल्लो तटिय क्षेत्रमा पानीबाट हुने क्षतिबारे छलफल
राजापुरमा थारु तथा सोनाहा होमस्टे संचालनमा : मुरगहवालाई नमुना गाँउ घोषणा
राजापुरमा कृषिमेला शुरु : ‘स्थानिय कृषि, पर्यटन र सस्कृतिको विकासमा टेवा पुग्ने’
म नगरप्रमुख पदबाट राजिनामा दिन्छु : ठाकुरबाबा नगरप्रमुख श्रेष्ठ
अर्काइभ Select Month February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014